Jarista tigidhada lugta 2-aad ee Napoli-Real Madrid oo berri toos u bilaabmaysa! – Gool FM
Jarista tigidhada lugta 2-aad ee Napoli-Real Madrid oo berri toos u bilaabmaysa!
Raage January 1, 2017
(Napoli) 01 Jan 2017 – Kooxda SSC Napoli ayaa soo hormarisay iibka tigidhada meelaha qaar ka mid ah garoonka San Paolo sida qaybta loo yaqaanno Curva Sud, kulanka lugta 2-aad ee bug-baxda Champions League ay ku wahayso Real Madrid bisha Maarso 7.
Berri markii la gaaro 12-ka duhurnimo ayay dadku iibsan karaa tigidhada labada qaybood ee ugu dadka badan, kuwaasoo qayb distinti lagu iibin doono 100 euro, halka qaybta Curva la siin doono 50 euro.
Waxaa berri iib ah ilaa ku dhowaad 45,000 oo kursi, marka laga reebo qaybaha u dhoowran taageerayaasha rigliga ah ee iibsada tigidhada fasalka oo idil, kuwaasoo la sugi doono tan iyo 20-ka bishan Jannaayo.
Go’aankan ayaa la qaatay iyadoo laga jawaabayo dalab lasoo jeediyay, waxaana qofkiiba loo ogol yahay inuu ugu badnaan uu laba tigidh oo kale uu u iibiyo 2 qof oo kale kaddib marka uu muujiyo kaarkiisa aqoonsiga.
Ka bogo xiddigaha sida bilaashka ah kooxahooda uga tagi kara La Liga sanadka cusub ee 2017…(Pepe iyo Fernando Torres oo ka mid ah)
Joe Hart oo u sheegay asxaabtiisa inuu danaynayo ku biirida Liverpool